Published on Saturday, 25 July 2015 02:20
Written by ကိုသောင်း (ပညာရေး)
ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဆင်းရဲလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ျ ကျွန်တော်သိတာက တတိယတန်းကနေ ကျောင်းထွက်ပြီး ညဘက်တွေမှာ မုန့်ဖက်ထုပ်၊ ပြောင်းဖူး ပြုတ်ရောင်းနေရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို ရောင်းရလွန်းလို့ စိတ်တောင်ကုန်လာ တယ်။ ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ ဗဟိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားတွေထပ်ရပ်ပြီး ကျပ်ညပ်နေတာကလွဲလို့ မုန့်ဖက်ထုပ်ဝယ်စားမယ့်သူလည်း တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ လမ်းမကြီးဘေးမှာက တိုက်ကြီးတွေပဲများ တယ်။ အားလုံးက ချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲနေကြတာမို့ မုန့်ဖက်ထုပ်ရောင်းရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူမှန်းသိ လိုက်ရလို့ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတုန်းမှာပဲ လမ်းမြှောင်လေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မုန့်ရောင်းချင်ဇောနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်းပဲ အဲဒီလမ်းထဲကိုကွေ့ဝင် လိုက်တယ်။
အနောက်ကအသံတွေကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ခွေးတွေက ကျွန်တော့်ကိုကိုက်ဆွဲဖို့ ပြင်နေတယ်။ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ကျွန်တော်လည်း စွတ်ပြေးရတော့တယ်။ ကြောက်လွန်းလို့ ပင်ပန်းတာ တွေတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်တော့ လမ်းဘေးပိတောက်ပင် ကြီးအောက်မှာ ခဏနားလိုက်တယ်။ ဒီအတိုင်းနေလို့တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ လမ်းထဲကအိမ်တွေကို အားကိုးတကြီးနဲ့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးတံခါးတွေပိတ်ကုန်ပြီလေ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ် ပျက်ပျက်နဲ့ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။
ရှေ့မှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါလား။ အထဲမှာ လူတွေစားသောက်နေလိုက်ကြတာ။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရင်း မုန့်ဖက်ထုပ်ရောင်းနေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကော်းသားတစ် ယောက်ကမှ အရေးမစိုက်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးကသည်းခနဲရွာချလိုက်လို့ ဆိုင်ထဲကိုကျွန်တော် ဝင်ခိုလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ပေါ့ဆိုပြီး ဆိုင်ကအလုပ်သမားလေးက နှင်ထုတ်လို့ထွက်ခဲ့ရပြန် တယ်လေ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ခရီးဆက်ခဲ့ပြန်တယ်။ မိုးရွာထားတော့ လမ်းထဲမှာရေတွေကလျှံလို့၊ ကျွန် တော့်ဒူးလောက်၊ ပေါင်လောက်ရှိနေတယ်။ အိမ်တွေက ကျပ်သိပ်လို့၊ အိမ်ကြိုအိမ်ကြားထဲဝင်ပြီး ရသလောက်ရောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ညာသံတွေပေးပြီး မိုးက အုန်းအုန်းထရွာချလိုက်ပြန်တယ်။ မိုးသီး မိုးပေါက်တွေက ကျွန်တော့်ကိုယ် ပေါ်ကို ကျလာတယ်။ ဘယ်လိုမှရှောင်လို့ မလွတ်ဘူး။ အိမ်ကစာလာတဲ့ အဆာပြေထမင်းလည်း ဘယ်နံမှာ ကပ်သွားတယ်မသိလိုက်ရပါဘူး။ ကျွန်တော်လေ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ မိုးရေတွေနဲ့ရောပြီး မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။
သြော် . . . ငါ့အဖြစ်ကျ သူများတွေစာကျက်ချိန်၊ အိပ်ချိန်မှာတောင် လမ်းတကာလှည့်ပြီး ဈေးရောင်း နေရပါလားလို့တွေးပြီး ငိုတာပေါ့။
ကျေးဇူးကြီးလိုက်ပါဘိခင်ဗျာ၊ ဝယ့်မယ့်သူတစ်ယောက်ရှိလာပြီမို့ အားကိုးတကြီး ရောင်းဖို့ပြင်လိုက် တယ်။
‘ရော့ . . . မုန့်ဖက်ထုပ် ၁၀၀ ဖိုးပေး၊ ဒီနားမှာ ခဏခဏအော်မနေနဲ့၊ နားငြီးတယ်’
အို . . . လူဆိုတာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ပါလား၊ အခုပဲဈေးဝယ်တယ်၊ အခုပဲမောင်းထုတ်ပြန်တယ်။ မိုးကလည်း တဖြည်းဖြည်းချုပ်လာပြီ။ ည ၁၀ နာရီထိုးတော့မယ်။ ဓာတ်တိုင်က မီးလာလို့တော်သေး ရဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဈေးရောင်းလာလိုက်တာ လှည်းတန်းဘူတာအနီးကို ရောက်လာတယ်။ ဘူတာ ပေါ်မှာ ခေတ္တနားရင်းလူတွေ၊ ခွေးတွေမြင်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရပ်ကွက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးဘက်ကို အပြေးလေးပြန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အိမ်စုတ်စုတ်လေးကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်အားနည်းနည်း တက်မိတယ်။ ညကလည်း မှောင်လာပြီ။
အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်ဗိုက်ဆာပေမယ့် စားချင်စိတ်မရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်ရောက်တော့ အတော် ချောင်ကျတဲ့ ကွပ်ပျစ်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်တာကို ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြပါ ဘူး။ အမေက ညစာအတွက်အခုမှ ထင်းမီးလက်လက်လေးတွေနှင့် ချက်ပြုတ်နေကြတုန်း။
ကျွန်တော်လည်း မောမောနဲ့ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော်ကကျောင်း တက်ပြီး စာသင်နေရတယ်။ ဆရာမသင်တဲ့စာတွေကို လိုက်ဆိုနေရတယ်။ နေ့လယ်ရောက်တော့ ထမင်းစားချိန် ကျောင်းဆင်းသံချောင်းခေါက်သံက နားထဲဝင်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဇလုံသံ၊ ဇွန်း သံတွေကြောင့် ကျွန်တော်က ကိုယ်လက်တွေနာနေလို့ လှုပ်တောင်မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။
အမေက ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး ဇလုံထဲထမင်းပုံကျွေးတယ်။ ကျွန်တော့်အနားကို အဖေရောက်လာ တယ်။ ကျွန်တော့်ကို တွေတွေကြီးစိုက်ကြည့်တယ်။
ငါတို့သားလေး ပင်ပန်းပါတယ်ကွာ၊ နောက်ရက်ကစပြီး မုန့်ဖက်ထုပ်မရောင်းခိုင်းတော့ဘူး။ ကျောင်း ပြန်တက်ခိုင်းတော့မယ်။
အို . . . ကျွန်တော်အိပ်မက်တွေများ မက်နေရော့သလား၊ တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း၊ မရပ်မနား ဈေး ရောင်းနေရတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြင်နာသနားတတ်တဲ့ မိဘတွေဆိုတာ ရှိပါသေးလား။
ကျွန်တော့်မျက်စိထဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေ၊ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းတွေ၊ အခြေခံပညာကျောင်း တွေကို မြင်ယောင်လာတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့မယ်လို့ အောက် မေ့လိုက်ရပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ အမေကကျွန်တော့်ကို ရပ်ကွက်နဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့ မူလတန်းကျောင်းမှာ တကူးတကကျောင်းအပ်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းတက်ရလို့လားမသိဘူး၊ ကျွန်တော်လန်းဆန်းနေတယ်။ ကျွန်တော်က တတိယတန်းမှာ ကျောင်းပြန်နေရတယ်လေ။ ပညာရေးဝေးသည်မရှိဆိုတာ ကျွန်တော့် ကိုပြောတာပဲလို့ မှတ်ယူလိုက်တယ်။ ကြည့်စမ်း၊ ကံများတက်ချင်လာတော့ အဖေကဆိုက်ကားနင်းလို့ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံလေး ဝယ်ပေးတယ်။
ပျော်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ကျောင်းဝတ်စုံရှိတယ်။ နေစရာ ကျောင်းရှိတယ်။ သူများတွေလို စာတတ်တဲ့သူဖြစ်တော့မယ်။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်လေးဟာ စည်းရိုးမရှိ၊ အရံမရှိဆိုတော့ ဘယ်သူမဆိုလွတ်လွတ် လပ်လပ်သွားချင်ရာသွားလို့ ရတယ်။ ရန်မူမယ့်သူမရှိဘူး။ အားလုံးတစ်သားတည်း။ ကျွန်တော်က နေ့ ဘက်မှာကျောင်းတက်ပြီး ညဘက်မှာဈေးရောင်းရတာ ရိုးနေပါပြီ။ အပန်းမကြီးပါဘူး။ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် အမေတို့ကိုလုပ်ကျွေးမယ်လို့ သစ္စာပြုလိုက်ပါတယ်။ျ
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တာတွေက အများကြီးပါ။ အဖေ့ဝင်ငွေနည်းလို့ ထမင်းမချက်နိုင်တဲ့အခါ ညီလေးတွေ၊ ညီမလေးတွေ ဆာလောင်လို့ ငိုကြွေးကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်မ တတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထမင်းဝအောင် မစားရတဲ့ရက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြေ ကွဲရပါတယ်။
အဲဒီလို ကြေကွဲနေရတုန်း မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော်ရင်ကွဲရတော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့မိသားစု အိမ် ပြောင်းကြရတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးကို တာဝန်ရှိသူတွေက ဖျက်နေကြပါပြီ။ ကျူးကျော် ရပ်ကွက်ဖြစ်လို့တဲ့လေ။
ကျွန်တော်က တာဝန်ရှိသူတွေကို အနားကိုသွားပြီး တောင်းပန်ပေမယ့် သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကို အရေး မစိုက်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ ကျရှုံးလုပ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေပူလိုက် တာ။ ဟော . . . ကားကြီးလာပါပြီ။ လူကြီးတွေက ပစ္စည်းတွေသယ်ကြ၊ တင်ကြလုပ်နေတုန်း ကျွန် တော်က ကြောက်လန့်နေတဲ့ ညီလေးနဲ့၊ ညီမလေးကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။
အဖေက စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်နဲ့ ကျွန်တော့်တို့ကို ကားပေါ်တက်ဖို့ပြောတယ်။ အဖေ့ရင်အုံကြီးမောက် ကြွသွားပြီး သက်ပြင်းချသံကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်။ ကားကြီးပေါ်ကို ကျွန်တော်တက်လိုက် တော့ ကျောင်းမနေရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးက ချက်ချင်းဝင်လာတယ်။
အဖေက ကျွန်တော့်ကိုစာတတ်စေချင်သတဲ့လား။ ကျွန်တော်ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ ငူငူကြီးရပ်နေမိတယ်။ ဒီတုန်းဘေးက ကားတစ်စီးကျော်တက်ပြီး မောင်းလာလို့ ကားပေါ်မှာကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ သူတို့လည်းကျောင်းနဲ့ဝေးရာကို သွားနေကြတာပါလား။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့လို ဘဝတူမိသားစုတွေ၊ သားသမီးတွေ၊ ပြီးတော့ နေစရာဘာမှမရှိတော့တဲ့ တလင်းကွင်းပြင်ကြီး၊ ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘယ်မှာနေကြရဦးမှာလဲ၊ ဘာလုပ် စားကြရမှာလဲ၊ ဘယ်ကျောင်းမှာစာသင်ကြရမှာလဲ။
အာဏာရှင် ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးမှာ ပညာရေးဝေးသည်မရှိလို့ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အခမဲ့ပညာရေးဝေးနေသည်လို့ ပြောရတော့မှာပဲ။ ။
ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်